Ingabe uyafuna Guqula Instagram Iphasiwedi? Kuyadingeka ngempela ukuba Setha kabusha Instagram Iphasiwedi ukuvikela i-akhawunti yakho. Lesi sihloko sibonisa indlela ngoba Indlela Shintsha Instagram Iphasiwedi ku izinyathelo ezilula.
Ngiphuphe okuxoxwe yonke inqubo Indlela Setha kabusha Instagram Iphasiwedi ngendlela elula kakhulu ukuze wonke umuntu kalula!. Kufanele ulandele izinyathelo njengoba kushiwo bese uqedela ngokuphumelelayo ukuze Guqula Instagram Iphasiwedi.
Ukuze ukwazi Umhlahlandlela ephelele une ukufunda lesi sihloko ngokucophelela. In the isinyathelo ngesinyathelo inqubo, Ngiye kuhlanganisiwe olusemthethweni website isixhumanisi ukuze ukwazi ukuqeda inqubo wakho wonke Setha kabusha Instagram Iphasiwedi kuphela endaweni eyodwa.
Indlela Shintsha Instagram Iphasiwedi | Isinyathelo by Isinyathelo Guide
Hlola ngezansi Ukukhuluma izinyathelo Guqula Instagram Iphasiwedi. Just follow the step by step guide and complete it to successfully Setha kabusha Instagram Iphasiwedi.
Manje, here on this page, you have to click on “Ngena ngemvume” inkinobho.
Manje, enter your Phone number, Igama lomsebenzisi, or email and Password and press the “Ngena ngemvume” inkinobho.
Ngemva kwalokho, you have to click on your profile picture on the right upper corner.
Manje, click on the round circle of options near Edit profile.
You will see different options pop-up on the screen now, chofoza ku “SHINTSHA iphasiwedi” option.
Ngemva kwalokho, you have to enter your Old password, Iphasiwedi Entsha, futhi Qinisekisa iphasiwedi entsha esikhaleni esinikeziwe ngokucophelela bese ucindezela “SHINTSHA iphasiwedi”.
Uthole ngempumelelo ukuqedela inqubo Guqula Instagram Iphasiwedi.
Nakuba Ukudala Iphasiwedi yakho uqinisekise ukuthi usebenzise Ezinkulu, Lowercase, izinombolo, futhi izinhlamvu ezikhethekile ukwenza Iphasiwedi yakho Namandla. Kubalulekile ngempela ye-akhawunti yakho ye-Instagram Ezokuphepha.
Lesi sihloko liyisiqondiso ephelele ukuze Indlela Shintsha Instagram Iphasiwedi. Funda inqubo ephelele okukhulunywa ngawo lapha igxathu negxathu indlela bese ulandela yona ngempumelelo Setha kabusha Instagram Iphasiwedi. Ungakhohlwa ukudala Iphasiwedi Strong ukuvikela i-akhawunti yakho.
Uma ufuna ukwabelana impendulo yakho mayelana lesi sihloko noma unemibuzo bese usebenzisa ngezansi Ukukhuluma amazwana ibhokisi ukwabelana. Futhi uthole update njalo website yethu www-hotmail-com.email.
Filed Under: Reset Password Tagged With: shintsha iphasiwedi Instagram, Khohlwa iphasiwedi Instagram, Indlela ukuze usethe kabusha iphasiwedi Instagram